Knowledge | Posted by Si Thu Aung
[Unicode] နှင်းဆီပန်းတွေဟာ ပန်းတွေထဲမှာ အလှဆုံးပန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ လုံးဝငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ ဒီလိုလှပတဲ့ တော်ဝင်နှင်းဆီတွေကို အိမ်မှာတင်လွယ်ကူစွာစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှာနှင်းဆီစိုက်ပျိုးချင်သူတွေအတွက်...
[Unicode] ယနေ့ခေတ် နိုင်ငံတကာမှာ အမျိုးသမီးတွေကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ ဥပဒေတွေ ပေါ်ထွန်းလာပါပြီ။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ Sexual Harassment ခံရတဲ့အခါ ရှက်မနေ၊ ကြောက်မနေဘဲ အမျိုးသမီးတွေကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ ဥပဒေတွေကို လေ့လာမှတ်သားပြီး တရားစွဲဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒီဥပဒေတွေကို...
Knowledge | Posted by Zarni Kyaw
[Unicode] အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်လောကတွင် အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ခြင်းအပြင် အပေါင်အနှံလက်ခံခြင်း၊ ငွေပေးအပေါင်စာချုပ်ဖြင့် ငွေချေးယူခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ တစ်ချို့သော သူများသည် ငွေလိုသည့်အတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်ထံမှ ငွေချေးလိုသည့်အခါ အာမခံသဘောဖြင့်...
[Unicode] အစာခြေ လမ်းကြောင်း စနစ်ကို ကျန်းမာစေပါတယ်ကိုက်လန် မှာ ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပါးပြီး အဆီဓာတ်လည်း လုံးဝမပါပါဘူး။ အမျှင်ဓာတ်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုက်လန်တစ်ခွက်မှာ ၃၆ ကယ်လိုရီ နဲ့ အမျှင်ဓာတ်ငါးဂရမ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ အထွေထွေ ကျန်းမာရေးကို...
[Unicode] ယခုလိုအချိန်ကာလမှာ လူတွေဟာ အစားအစာအတွက်အပြင်လူနဲ့ ထိတွေ့နေကြရတာပိုများပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ အစားအစာတွေ မလေလွင့်စေဖို့နဲ့ တော်တန်ရုံနဲ့ ထပ်မဝယ်ရဖို့က ကျန်းမာရေးအရရော စီးပွားရေးအရပါ အရေးပါပါတယ်။ဒါကြောင့် ယုဝေက...
Knowledge | Posted by Aye Myat Thu
[Unicode] အိမ်​တစ်​အိမ်​ ​ဆောက်​ရင်​ အဓိက ( ၃ ) ချက်​ရှိတယ်​ *အိမ်​ ပနပ်​*အိမ်​ ဦးရင်​တိုင်​ *​လှေကား အဲ့ဒါ အဓိက ဘဲ။ ( မ​ဆောက်​​ကောင်း​သောအိမ်​များ...
န်ိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်ထပ်ထားသော မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာဝင်အမျိုးသမီး၏...
Knowledge | Posted by Hnin Ei Khin
[Unicode] မကြာမီ ရက်ပိုင်းကဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ သားဖြစ်သူသည် စာရေးသူထံ ရောက်လာပါသည်။ ''မင်္ဂလာပါဆရာ''ဟု စာရေးသူအား နှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။ ''မင်္ဂလာပါ သားရယ်'' ဒါနဲ့ မောင်ရင့်ဖခင်နဲ့ဆို မတွေ့တာ အတော်ကြာပြီ။ နေကောင်းရဲ့လား'' ''နေတော့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်...
Knowledge | Posted by Shwe Zin Win
[Unicode] '' လာဗျာ ဦးသော်တာ၊ အရေးတ ကြီး ကိစ္စရှိတယ်ထင်တယ်'' စာရေး သူ၏ ရုံးခန်းသို့ မောပန်း စွာတက်လာဟန်ရှိသည့် ဦးသော်တာ ကို စာရေးသူက နှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ '' အင်းဗျာ၊ ဆရာ့ရုံးခန်းကလည်း လေးထပ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်အသက် နဲ့ မောတယ်ဗျာ။ ဆရာဘယ်လိုများ...
[Unicode] မြေချပါမစ်များပျောက်ဆုံးနေပါက ပျောက်ဆုံးသည့်နေရာနှင့် အချိန်တို့ကိုဖော်ပြကာ မည်သို့မည်ပုံ ပျောက်ဆုံးကြောင်းလျှောက်ထားပြီး မှန်ကန်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာ ရယကရုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ရဲစခန်းထောက်ခံစာတို့ကို...
[Unicode] အိမ်ရှင်မတွေရဲ့ မီးဖိုချောင်မှာ မကြာခဏ တွေ့ရတတ်တဲ့ အသီးအနှံတွေထဲမှာ ရုံးပတီသီးလည်း ပါပါတယ်။ ရုံးပတီသီးကို ကြော်စားခြင်း၊ တို့စရာအဖြစ် စားခြင်း၊ ချဉ်ရည်ဟင်းထဲ ထည့်ချက်ခြင်း စသည်ကဲ့သို့ အမျိုးမျိုး စားလို့ရပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့...